Annisaa Atoomii - Wikipedia
Anistaayiin akkamitti anniisaa atoomii keessaa cuunfuu akka dandeenyu nu barsiiseera. Tarii namni kun samuu xiqqoo qabnu kana keessaa akkamitti waan bu'aa fidu tokko yookan lama baasuu akka dandeenyu nu barsiisu danda'a ta'a. Kanaaf ammoo haala rafiitii, nyaataa fi filannoo uffannaa isaa beekuun nu gargaaruu malaa.
Hirriba sa'aatii 10 fi sillimii sakoondii tokko Rafuun sammuu namaaf gaarii ta'uu isaa hundumti keenyayyuu ni beekna. Anistaayiin guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii 10'nif rafuun namoota hedduu caalaatti gorsa fayyaa kana hojii irra nama oolche dha.
Seenaa dhala namaa keessatti kalaqaalee Albart Anistaayin jijjiirama gurguddoo fidan kan akka Gabatee Pereedikii, caasaa DNA fi yaad-rimee Ispeeshaal rileetiivitii (Special relativity theory) yoo fudhanne, hundi isaanii iyyu kan argaman yeroo namnni kun rafu ta'uun isaa beekameera.
Kesaattu dhuma irra kan jiru kan yaad-rimee abjuu keessaa loon elektrikiidhaan yeroo ajjefaman arge ture. Haa ta'u male kun dhugaa ta'u ni danda'aa laata?
Suuraa abba warraa fi haadha warraa rafaa jiranii
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Annisaa_Atoomii&oldid=36834" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 10 Caamsaa 2021, sa'aa 16:50 irratti.